Exclusice : बग्गी लिएर घर मै पुगे आयुषमान प्रियंकालाई यसरी सर्प्राइज दिए ( लाइभ दृश्य )
February 27, 2018 Spnews 0
भगवान् गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मका प्रणेता हुन् । अधिकांश बौद्ध परम्पराले उनीलाई हाम्रो कल्पका एक सम्यक सम्बुद्धको रूपमा मान्दछन् । बुद्ध भन्नाले बोधिप्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेको महामानव बुझिन्छ । बुद्ध कहलाईनु अघि यिनको […]
सम्पूर्ण नेपालीलाइ फागुन १९ गते टुँडिखेलमा आउनको लागि रबि लामिछानेको यस्तो अनुरोध (भिडियो)
विश्व कीर्तिमानी परिषद् नेपालले ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ भन्ने सन्देश दिन यही फागुन १९ गते टुँडिखेलमा धम्मपद (बुद्ध वचन) वाचन गर्ने भएको छ । मुलुकको गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा फैलाउन आयोजना गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई […]
भैरवको मन्दिरमा पूर्व युवराज शाह ! ‘सरकारको जयहोस’ भन्दै नाराबाजी
पूर्व युवराज पारस शाहले मंगलबार काठमाडौंको टेकूस्थित पचली भैरव मन्दिरको दर्शन गरेका छन् । पूर्व युवराज शाहले भरवनाथ मन्दिरमा पुगी पूजा आराधना गरेका हुन् । त्यस अवसरमा मन्दिर परिसरमा उनलाई पञ्चैबाजा बजाएर स्वागत गरिएको थियो […]
ठूलै मन्त्रीले मलाई यौन हिंसा गरे- ज्योती मगर (भिडियो)
काठमाडौं । ज्योती मगरको नामसँगै जोडिन्छ ‘ग्ल्यामर’ । धेरैले उनलाई ‘भल्गर’ रुपमा पनि ब्याख्या गरिदिन्छन् । ज्योती भने वास्तविकतामा आफू त्यस्तो नभएको बताउँछिन् । थुप्रै ‘स्टेज पर्फमेन्स’मा भेट हुने दर्शकहरु ज्योतीको यथार्थ बुझेपछि प्रशंसक नै […]
नायिका श्रीदेवीको हत्या गरिएको आशंका
एजेन्सी, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवीको मृत्युको विषयमा हत्या गरिएको हुनसक्ने आंशका गरिएको छ । भारतको राजतितिक दल भाजपाका सांसद सुब्रहमण्यम स्वामीले श्रीदेवीको हत्या गरिएको बयान दिएका छन् । बाथटबमा डुबेर श्रीदेवीको मृत्यु हुन नसक्ने उनको भनाइ […]
छाला चाउरी पर्नबाट जोगाउने यी फलफुलहरु !
बृद्ध हुनु प्राकृतिक नियम हो । उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र […]
सिरियामा भएको नरसंहारको विरोधमा नेपाली मुस्लिमले अमेरिका लाई दिए यस्तो चेतावनी (भिडियो)
रुसले सीरियामा दैनिक पाँच घण्टा हवाई आक्रमण रोक्ने भएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सेनालाई सीरियामा दैनिक पाँच घण्टा युद्धविराम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सीरियाका विद्रोही प्रभावित क्षेत्रमा सीरिया सरकारी सेनाले सुरु […]
कस्तो अचम्म ! मानिसले अण्डा पारेपछि सबै भए चकित (भिडियो)
इण्डोनेसियामा एउटा अचम्म लाग्दो घटना सार्वजनिक भएको छ जुन तपाइलाई पत्याउनै मुस्किल पर्ने छ । त्यहाँ एकजना किशोरले पछिल्लो दुई वर्षदेखि अण्डा पारिरहेको घटनाले सबैलाई तिनछक पारेको छ । १४ वर्षका किशोरले अण्डा पारेको भिडियो […]
नेपालको प्रसिद्ध तिर्थ-धाम जनकपुरको जानकी मन्दिरमाथि भारतको झण्डा राखेर नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ । भारतको झण्डा राखेको थुप्रै समय भैसक्दापनि प्रशासन मौन छ भने त्यहाँका अन्य राजनीतिक दलले समेत यसबारे कुनै चासो […]